Oge nlekọta ezinụlọ na studio
Oge na-adịghị mma, anyị na-agbanwe, anyị na-adị iche, ụmụ anyị na-etolite, foto ndị na-ekpo ọkụ na-enyekwara anyị aka icheta oge dị ebube nke ndụ.
Kwa afọ, nnyefe ezinụlọ na-aghọwanye ndị a ma ama na mba anyị. Ọ bụghị ihe ijuanya! A sị ka e kwuwe, nke a abụghị naanị ihe na-egbuke egbuke ma na-enye obi ụtọ, ma nwee ohere iji weghachite akụkọ ihe mere eme ma nyefee ndị na-echeta n'ọdịnihu.
Ebumnuche maka ịme foto nke mara mma na ụlọ ọrụ
Ị nwere ike ịme ihe osise nke onye òtù ezinụlọ, na foto otu. I nwekwara ike ibute ihe omimi, jide mmetụta uche, weputa mmetụta. Chee echiche banyere ihe ịchọrọ ịhụ na foto, ma soro onye na-ese foto kwurịta echiche gị.
Detuo akụkọ banyere ịhụnanya gị, onye mbụ ị maara ma ọ bụ uto nwa. Tinye ọrụ nke ndị dike nkiri ma ọ bụ akụkọ ihe atụ-ụmụ gị ga-enwe mmasị na ya. Onye ọkachamara ọkachamara nwere ngwa ngwa na àgwà dị mkpa.
Ọhụụ nke oge a na-enwe ọmụmụ ihe ezinụlọ nke oge a adịghị achọ ka ị na-atụgharịghachi poses - na-akpa àgwà n'ụzọ nkịtị ma dị jụụ. Ihe ima ima na ihe siri ike bu ihe osise ndi ahu, nke mama na nna na-esutu umuaka, ma obu soro umu ha. Mee foto na-adọrọ mmasị ma dị mma, ebe nwa na-anọdụ n'elu nna ya, nke abụọ ejiri nne, nke nwere obi ụtọ ọzọ na ya. Were ihe egwuregwu ụmụaka kachasị mmasị na studio, ka ha wee nwee obi ụtọ n'ụlọ.
Oge foto ọkachamara na studio
Nne kacha mkpa iji nlezianya kwadebe maka oge foto. A sị ka e kwuwe, ọ bụghị naanị na ọ ga-achọ mma na-adọrọ mmasị ma mara mma, ma hụkwa na ndị niile nọ n'ezinụlọ dị mma. Ezinụlọ kwesịrị ile anya, ọ bụghị naanị n'amaghị ama, kamakwa ha ga-adị n'otu. Ya mere, dozie uwe nke otu ụdị na agba. Ma mgbe ụfọdụ, ọdịiche ahụ nwere ike ịmepụta mmetụta dị mma.
Chee echiche banyere ụdị maka ịse foto na studio. Maka foto ezinụlọ ka zuru oke maka mba, nwa ehi, mmiri mmiri ma ọ bụ azụ. Enwere otutu okwu maka oge ịse foto na studio - gwa onye na-ese foto ma ọ bụ mepụta ihe mbụ onwe gị.
Ezigbo ndị ezinụlọ na-eme ihe ngosi - ọ bụ ọrụ na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ nke na-eme ka ezinụlọ dum dị n'otu. Ọ bụghị naanị na ị ga-enwe mmetụta dị ebube, mana yana foto na-egbuke egbuke. Ha nwere ike ichota ụlọ ahụ, yana igosi ma zipu ndị ikwu. Taa, oge ọmụmụ ihe ezinụlọ aghọwo ọdịnala na akụkụ dị mkpa nke ndụ ezinụlọ ọ bụla!
Esi eji ejiji na ihe nkiri?
Khaki agba - kedu agba ọ bụ?
Uwe obodo Russia
Nelva Mgbụsị akwụkwọ-Winter 2016-2017
Photoshoot na oyi na n'okporo ámá - echiche
Ụdọ Mọstad - na ihe ị ga-eyi?
Kedu esi zoo ụkwụ gị?
Ejiji maka ịke
Kedu ihe ga-eyi akpụkpọ ụkwụ ụkwụ ụkwụ?
Kedu ihe ị ga-eyi akwa mkpuchi akpụkpọ anụ?
Foto dị na ụlọ
Harley Quinn akpụkpọ ụkwụ
Camcorder maka onyunyo - nke usoro onyunyo kacha mma ịhọrọ?
Isi tii dị mma na ihe ọjọọ
Ndị na-ekiri oyi
Mkpụrụ vaịn "Oge"
Egwuregwu egwuregwu ndị inyom a rụrụ na 2013
Ọchịchị maka nwa amụrụ ọhụrụ
Nyocha na akpanwa
Kedu ka esi etinye tile n'ime ime ụlọ ịwụ?
Masks maka ngwa ngwa ntolite
Ngwá ọrụ Crispy - uzommeputa maka ugbo ogwu
Ebee ka ị ga-ezu ike n'April?
Plum ternovka - uru na nsogbu
Achịcha ntutu - nnukwu curls
Ụdị ejiji 2015
Shaoo na ulo - Ezi ntụziaka
Achicha nke akwa akwa
Esi tufuo slugs n'ime okpuru ulo?